I-China Zithini izibonelelo zemithombo yokukhanya kwe-LED? umzi-mveliso nabavelisi | I-REIDZ
Zeziphi izibonelelo zemithombo yokukhanya kwamanqaku e-LED?
Njengesizukulwane esitsha somthombo wokukhanya, ukukhanya kwe-point point ye-LED kuthatha indawo eyakhelwe-ngaphakathi kwimithombo yokukhanya ebandayo ye-LED, enokukhupha imibala eyahlukeneyo ngokweemfuno; kwangaxeshanye, inokwakhelwa ngaphakathi i-microcomputer chip, ngokusebenzisa inkqubo yokulawula, ukufezekisa imibala egcwele imibala enje ngebala elimibalabala, ukutsiba, ukuskena, kunye namanzi; Ikhusi lokubonisa lenkcazo ethile linokutshintshwa luhlu kunye nokudityaniswa kobume beepiksi ezininzi zemithombo yokukhanya, kunye neendlela ezahlukeneyo, isicatshulwa kunye oopopayi, Iziphumo zevidiyo, njl. njl. imithombo yokukhanyisa ukukhanya isetyenziswa ngokubanzi kwiiprojekthi zezibane zangaphandle.
Imithombo ekhanyayo yemithombo ye-LED yahlukile kakhulu kwimitha yobushushu bemveli kunye nemithombo yokukhupha igesi (njengezibane ze-incandescent, izibane zesodium ephezulu yoxinzelelo).
Imithombo yokukhanyisa yangoku ye-LED inezi zibonelelo zilandelayo xa ikhanyisa:
1. Ukunyibilika komhlaba kunye nokumelana nefuthe
Ubume besiseko somthombo wokukhanya wenqaku le-LED ukubeka izinto ze-electroluminescent semiconductor kwisakhelo esikhokelayo, kwaye emva koko uyitywine nge-epoxy resin ejikeleze kuyo. Akukho igobolondo yeglasi kwisakhiwo. Akukho sidingo sokukhupha okanye ukugcwalisa igesi kwityhubhu efana ne-incandescent okanye izibane ze-fluorescent. Ke ngoko, umthombo wesibane we-LED une-shock good ukumelana kunye nefuthe lokungqubana, okuzisa kube lula kwimveliso, ukuthutha kunye nokusetyenziswa komthombo wokukhanya kwe-LED.
2. ikhuselekile kwaye izinzile
Imithombo ekhanyayo ye-LED inakho ukuqhutywa ngevolthi ephantsi DC. Ngaphantsi kweemeko eziqhelekileyo, umbane wokuhambisa umbane uphakathi kwe-6 ne-24 volts, kwaye ukusebenza kokhuseleko kungcono. Ilungele ukusetyenziswa kwiindawo zikawonke-wonke. Ukongeza, kwindawo engcono yangaphandle, umthombo wokukhanya unekuhanjiswa okuncinci kunemithombo yokukhanya yesiqhelo kwaye unobomi obude. Nokuba ihlala ivuliwe kwaye icinyiwe, ubomi bayo abuyi kuchaphazeleka.
3. ukusebenza kakuhle kokusingqongileyo
Ngenxa yokuba umthombo okhanyayo we-LED awongezi i-zebhetri zensimbi ngexesha lenkqubo yemveliso, ayizukubangela ungcoliseko lwe-mercury emva kokuba ilahliwe, kwaye inkunkuma yayo inokuphinda iphinde isebenze, konga izixhobo kunye nokukhusela okusingqongileyo.
4. ixesha lokuphendula ngokukhawuleza
Ixesha lokuphendula kwezibane ze-incandescent yi-milliseconds, kunye nexesha lokuphendula kokukhanya zii-nanoseconds. Ke ngoko, isetyenziswe ngokubanzi kwimimandla yezibane zezithuthi kunye nezibane zemoto.
5. Ukulungelelanisa ukukhanya okuqaqambileyo
Ngokomgaqo wokukhanya kumthombo we-LED, ukukhanya okuqaqambileyo okanye ukukhanya okukhutshiweyo kuyatshintshwa ngokuqinisekileyo kusisiseko. Ukusebenza kwayo okwangoku kunokuba nkulu okanye kuncinci ngaphakathi kuluhlu olukulinganiselweyo, kwaye inokulungelelaniswa okuhle, okubeka isiseko sokufezekisa ukukhanyiswa komntu kunye nokukhanya okuqaqambileyo kwemithombo yokukhanya ye-LED.